Fongoriko ny kolikoly Tia tanindrazana /* Google reCaptcha JS */
Handefa fitarainana kolikoly
Sokajy / Catégorie:
Centre ImmatriculateurMpitandro filaminana/Zandarmaria/PolisyFananan-tanyFadin-tserananaFitateranaFitsaboana /hopitalyFitsaranaSampan-draharaha itsinjaram-pahefanaMinisteraHafa
Antsipiriany / Description
Manome toky ny gazety Tia Tanindrazana fa hiaro sy hitazona ho tsiambaratelo ny loharanom-baovao rehetra araka ny hameran’ny lalàna azy. Noho izany dia miantoka ihany koa ny fiarovana ny fitaovana rehetra ampiasaina ny Tia Tanindrazana mba tena hijanona ho tsiambaratelo ny fitarainana voaray.
Mitondra ny anjara birikiny amin’ny ady amin’ny kolikoly sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana eto Madagasikara ny gazety Tia Tanindrazana. Ka sehatra iray noforonina mba hanatanterahana izany indrindra ny vovonana «Fongoriko ny Kolikoly», hita ao anaty gazety Tia Tanindrazana sy ao amin’ny tranonkalany ary hamoronana « application » ho an’ny finday sy ny tablety ihany koa.
Tanjona ny hamaky bantsilana sy hampiseho masoandro ny trangana kolikoly mahazo ny olom-pirenena amin’ny andavanandrom-piainany.Mampahafantatra ny tanjon’ny vovonana «Fongoriko ny Kolikoly » ity sata ity no sady mamaritra ny fomba fiasa hanatanterahana azy mba tena ho fitaovana mahomby sy maharitra hanovana an’i Madagasikara tokoa izy.
Mandray sy manangona ny fitarainana rehetra manerana an’i Madagasikara momba ny trangana kolikoly ny «Fongoriko ny Kolikoly ». Mitondra porofo an-tsoratra, amina horonam-peo sy horonan-tsary manamarina ny tranga misy. Hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanovana ny foto-pisainan’ireo zatra manao kolikoly.
Ny gazety Tia Tanindrazana sy ny mpikirakira ny tranokala dia tsy mamoaka :
-tranga misy loko politika, ara-pivavahana,ara-poko na miendrika fanavakavaham-bolon-koditra
-tranga misy tanjona ara-barotra
-tranga mety hitarika korontana sy savorovoro
Sy ireo tranga na zava-miseho hafa rehetra mifanohitra amin’ny tanjona napetraky ny vovonana “Fongoriko ny Kolikoly” dia ny ady amin’ny kolikoly izany.
Endrika sy mombamomba azy:
Tranokala (site internet) sy « application mobile » kirakiran’ny mpanao gazetin’ny Tia Tanindrazana ny “Fongoriko ny Kolikoly” ary mivoaka ao anatin’ny gazety Tia Tanindrazana ihany koa.Manaraka ny teknôlôjia izy ity ka noho izany mampiasa ireo singa rehetra mahazatra mandrafitra izany tahaka ny :
- Un Système d’identification
- Un module de gestion des alertes et notifications
- Un module de dénonciation
- Un module de consultation des cas de corruption
- Un module de partage vers les réseaux sociaux
- Un moteur de recherche par mot clé ou par catégorie
Afaka ampiasain’ny olona rehetra manana adiresy e-mail ity sehatra ity saingy tsy maintsy misoratra anarana sy milaza ny mombamomba azy ny tsirairay mba hisorohana fanalam-baraka sy fiampangana tsy mitombina.
Manome toky ny gazety Tia Tanindrazana fa hiaro sy hitazona ho tsiambaratelo ny loaharanom-baovao rehetra araka ny hameran’ny lalàna azy. Noho izany dia miantoka ihany koa ny fiarovana ny fitaovana rehetra ampiasaina ny Tia Tanindrazana mba tena hijanona ho tsambaratelo ny fitarainana voaray.
Fandikana ny fifanarahana :
Esorin’ny mpikirakira ny tranokala avy hatrany ireo olona mampiasa ny vovonana «Fongoriko ny Kolikoly» tsy manaja ny fifanarahana ary mamerina izany matetika. Afaka entina eny amin’ireo ambaratongam-pahefana misy ny raharaha mampifanolana.
Ekeko ny sata ifampifehezana / J'accepte les conditions d'utilisation
Porofo / Preuve: raha afaka manome porofo / si vous pouvez fournir une preuve